२१ गतेबाट काठमाडौं उपत्यकामा सबै खालका सवारी साधन चल्ने! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/२१ गतेबाट काठमाडौं उपत्यकामा सबै खालका सवारी साधन चल्ने!
उता प्रशासनले यसअघि नै साउन ५ गतेबाट जोरबिजोर प्रणालीमा सवारी संचालन गराउन अनुमति दिएको थियो । त्यसमा पनि २५ सिट क्षमता भन्दा बढीका सावारी मात्रै संचालन गर्न अनुमति दिइएको थियो । तथापि यातायात व्यावसायीहरु भने प्रशासनको निर्णय प्रति असन्तुष्ट रहेका थिए । तर आजको छलफलमा भने तीनै जिल्लाका सिडीओहरुले ३ दिन समय पर्खन अनुरोध गरेकोले पर्खने र सोमबारबाट सावारी संचालन गर्ने नेपाल यातायात मजदुर संघले जनाएको छ ।
संघका अनुसार कोरोना महामारी नबढे सोमबारदेखि लामो, मध्यम तथा छोटो दुरीका सबै गाडी चल्नेछन् । अवस्था अनुकुल भए स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर सोबारबाट सबै किसिमका सवारी संचालन गरिने संघको भनाइ छ ।
काठमाडौंमा १० बर्ष बसेर रित्तिएर आफ्नै गाउँ फर्किएको त्यो युवक…….